Desogestrel Powder For Sale: Nyocha & Ụdị & Mmetụta
/blog/Desogestrel/Desogestrel Powder For Sale: Nyocha & Ụdị & Mmetụta
Ihe na 06 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Desogestrel. O nwere 0 Comment.
Ihe niile banyere Desogestrel Powder
1.Desogestrel 54024-22-5 Isi
3. Ngwuputa nke oru-Ngwurugwu ndi ozo
4.Otu esi eji ogwu di iche iche?
5. Ọgwụgwụ Desogestrel Powder
6.Who nwere ike iji Desogestrel uzuzu?
7. Uru na ọghọm-Desogestrel Powder
9.Desogestrel Powder Effects mgbe nwa ara
10.Desogestrel ntụ ntụ maka ere
Desogestrel ugbo video
aha: Desogestrel ntụ ntụ
Ụdị Mkpụrụkpụ: C22H30O
Ọbara arọ: 310.47
1. 54024-22-5 nke Desogestrel
Desogestrel a na-ejikwa ngọngọ ethinyl estradiol egbochi ime ime. Ọ bụ mpi akara akara nke nwere ụdị hormones abụọ, desogestrel na ethinyl estradiol, ma mgbe ejiri ya nke ọma, gbochie ime ime. Ọ na-arụ ọrụ site n'ịkwụsị àkwá nwanyị site na-emepe ọ bụla kwa ọnwa. Azụ ahụ apụghịzi ịnakwere spam na fatịlaịza (ime) egbochi.
Ọ dịghị usoro ọgwụ mgbochi bụ 100 percent dị irè. Usoro nchịkwa nke ọmụmụ dị ka ịwa ahụ iji bụrụ ndị na-adịghị mma ma ọ bụ inwe mmekọahụ enwere irè karịa umuntakịrị ọgwụ. Gwa ndị dọkịta gị nhọrọ maka akara nwa.
Ọgwụ a adịghị egbochi nje HIV ma ọ bụ ọrịa ndị ọzọ a na-ebute site ná mmekọahụ. Ọ gaghị enyere aka dịka ọgwụ mgbochi mberede, dị ka mgbe ọ na-esiteghi na mmekọrịta nwoke na nwanyị na-enweghị nchebe. Nke a bụ nanị ọgwụ dọkịta gị.
Product Name Desogestrel ntụ ntụ
molekụla Formula C22H30O
molekụla arọ 310.47
3. Mechanism Of Action—Ọkụ nke Desogestrel
Na-agbakwunye ndị na-anabata ya na estrogen. Ngwongwo ndị a na-agụnye gụnyere traktị nke nwanyi, mammary gland, hypothalamus, na pituitary. Ozugbo agbatị na onye nkwụnye ahụ, ndị ọkachamara dịka desogestrel ga-eme ka ugboro ole ịhapụ nke gonadotropin na-ahapụ hormone (GnRH) site na hypothalamus ma mee ka LH na-ebute ọbara na-aga n'ihu.
A na-eji Desogestrel mee ihe dị ka nwanyi na-egbochi ụmụaka. Desogestrel bụ progestin ma ọ bụ ụdị sịntetị nke hormone nwoke na nwanyị na-emekarị, progesterone. N'ihe dị ka nwanyị na-eme, ọ na-eto ma na-ahapụ ya site na ovaries. Ubi ahụ na-arụpụta oge ahụ, na-egbochi ịhapụ nsen ndị ọzọ na ịmalite imechi akpa nwa maka ime ime ime. Ọ bụrụ na ime emee, ọnọdụ progesterone na ahụ dị elu, na-emechi akpa nwa. Ọ bụrụ na ime anaghị eme, ngụkọta progesterone na ọdịda ahụ dara, nke na-akpata oge ịhụ nsọ. Desogestrel na-eme ka usoro ahụ dị na-eche na ọ dịla nwa, site n'ịnọgide na-enwe ọkwa dị elu nke progesterone. Nke a na-egbochi ịhapụ akwa si ovaries.
4. Kedu esi eji okwusiri ihe ubi?
Ọ dị ezigbo mkpa ka ị jiri ọgwụ a mee ihe kpọmkwem dịka dọkịta gị gwara gị. Ejila ya karia ya, emela ya ugboro ugboro, ma ghara iji ya mee ogologo oge karịa dọkịta gị nyere iwu.
Iji mee ihe iji gbochie ọgwụ mgbochi ọnụ dịka nchekwa ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na o kwere mee, ị ga-aghọta ụzọ na mgbe ị ga-ewe ha na ihe ndị nwere ike ịtụ anya ya.
Ọgwụ a na-abịa na ntuziaka ọrịa. Gụọ ma soro ntuziaka ndị a nke ọma. Jụọ onye dọkịta gị maọbụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
A na-enweta ọgwụ a na mpempe akwụkwọ ntanetị na mpempe akwụkwọ mbadamba. Kọmitii 28 nke ọ bụla nwere agba dị iche iche nke dị mkpa ka e weere na otu ihe ahụ dịka a gwara ya na ọnya ahụ.
Mgbe ịmalite iji ọgwụ a, ahụ gị ga-achọ ka ọ dịkarịa ala oge 7 gbanwee tupu enweghi ime ime. Jiri ụdị ime mgbochi nke abụọ (dịka, condom, spermicide, ma ọ bụ diaphragm) maka ụbọchị 7 mbụ nke mkpụrụ ọgwụ ọgwụ mbụ gị.
Were DesogestrelNzuzu n'otu oge kwa ụbọchị. Mkpụrụ ọgwụ akara ọmụmụ na-arụ ọrụ kachasị mma ma ọ bụ karịa awa 24 gafere n'etiti doses.
Ejila oge awa 24 egwu ma ọ bụ egbu oge. Ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ, ị nwere ike ime ime. Jụọ dọkịta gị ụzọ iji nyere gị aka icheta ịṅụ ọgwụ gị ma ọ bụ banyere iji usoro ọzọ ịmụ nwa.
Ị nwere ike iche na ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ na-emegharị ahụ, karịsịa n'oge ọnwa ole na ole mbụ ị na-eji ọgwụ a. Ọ bụrụ na ọgbụgbọ gị na-aga n'ihu ma ghara ịla, kpọọ dọkịta gị.
Soro ntuziaka na akwukwo mgbochi ma ọ bụ kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị pọọ ma ọ bụ nwee afọ ọsịsa n'ime 3 ruo 4 awa nke na-ewere ọgwụ a. Na-emeso nke a dịka ụbụrụ e mefuru.
Aṅụla mkpụrụ osisi vaịn ma ọ bụ ṅụọ mmanya mkpụrụ osisi ka ị na-eji ọgwụ a eme ihe. Mkpụrụ vaịn na mkpụrụ osisi greepu nwere ike ịgbanwe ego nke ọgwụ a na-etinye n'ime ahụ.
Dọkịta gị nwere ike ịjụ gị ka ịmalite ụbọchị ọmụmụ ụbọchị mbụ nke oge nsọ gị (a na-akpọ Day 1 mmalite) ma ọ bụ na Sunday mbụ mgbe mbido oge ị ga-amalite (a kpọrọ Malite Sunday). Mgbe ịmalite n'ụbọchị ụfọdụ, ọ dị mkpa na ị na-agbaso usoro ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ. Agbanwela oge gị na nke gị. Ọ bụrụ na usoro ị na-eji adịghị adaba, soro dọkịta gị kọọrọ ya ịgbanwe ya. Maka mmalite Sunday, ịkwesịrị iji ụdị ọzọ ịmụ nwa (dịka, condom, diaphragm, spermicide) maka ụbọchị 7 mbụ.
Ịkwesịrị ịmalite usoro usoro ọgwụgwọ 28 na-esote na ụbọchị niile n'otu izu nke izu dị ka usoro mbụ ahụ malitere ma soro usoro ihe omume ahụ.
♦ Maka igbochi ime (iji gbochie afọ ime):
• Ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma - Otu mbadamba mbadamba mbadamba (arụ ọrụ) n'otu oge ahụ kwa ụbọchị maka ụbọchị 21 na-esochi otu mbadamba akwụkwọ ndụ (inert) kwa ụbọchị maka ụbọchị 7 kwa oge.
• Dọkịta-eji na dose ga-ekpebisi ike site dọkịta gị.
Kpọọ onye dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ maka ntuziaka. Nke a na ọgwụ nwere ụfọdụ ntụziaka onye ọrịa na ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ. Gụọ ma soro ntuziaka a ma jiri nlezianya kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Jiri usoro nke ịmụ nwa nke abụọ maka ụbọchị 7 mgbe ịchọrọ ọgwụ iji gbochie ime ime.
Jide n'aka na dọkịta gị maara ma ọ bụrụ na ịchọrọ oge 2 oge gị, n'ihi na nke a nwere ike ịpụta na ị dị ime. Ị nwere ike ọ gaghị enwe oge maka ọnwa ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe karịrị otu dose ma ọ bụ gbanwee oge gị.
Ị nwere ike ịnweta ọbara ọgbụgba ma ọ bụ na-achọpụta ma ọ bụrụ na ị gaghị ebute ọgwụ na oge. Mkpụrụ ọgwụ ndị ọzọ ị na-atụghị anya, ka o yikarịrị ka ị ga-agba ọbara.
♣ Ọ bụrụ na ị na-atụfu otu mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ: Were mkpuru ahụ ozugbo o kwere mee ma wepụ mpi ọzọ n'ime oge gị.
♣ Ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ abụọ mmanụ oliv na izu 1 ma ọ bụ 2: Were ọgwụ abụọ ahụ ozugbo o kwere omume na ọgwụ abụọ na-esote abụọ n'echi ya. Nọgide na-eburu otu mkpụrụ ọgwụ otu ụbọchị ruo mgbe i mechara mkpọ ahụ. Jiri ụzọ nke abụọ mụọ nwa (dịka, condom, spermicide) maka ụbọchị 7 mgbe ịchọrọ ọgwụ.
♣ Ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ abụọ mmanụ olulu na izu 3, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụ atọ ma ọ bụ karịa na ose ọ bụla n'izu ọbụla:
♦ Ụbọchị 1 malitere: Tụfuo mkpọ nke mkpọ ahụ ma malite otu mkpọ ọhụrụ n'ụbọchị ahụ.
♦ Malite Sunday: Gaa n'ihu na-ewere otu ọgwụ n'ime ụbọchị ruo Sunday, wee tụfuo mkpọmnta ego ahụ ma malite otu ngwugwu ụbọchị ahụ. Jiri ụzọ nke abụọ mụọ nwa (dịka, condom, spermicide) maka ụbọchị 7 mgbe ị na-atụ ụfụ, iji gbochie ime ime. Ọ bụrụ na ị na-atụ oge 2 oge izu ike gị n'otu oge, chọpụta dọkịta gị n'ihi na ị nwere ike ime ime.
♣ Ọ bụrụ na ị na-echefu mkpụrụ ọgwụ asaa ọ bụla n'ime izu 4: Gbanyụọ ọgwụ ndị i furu efu. Nọgide na-eburu otu mkpụrụ ọgwụ otu ụbọchị ruo mgbe i mechara mkpọ ahụ.
6. Ònye nwere ike iji Dna-eme ihentụ ntụ?
Ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị nwere ike iji deogestrel powder, ma ị gaghị enwe ike ma ọ bụrụ na ị:
♦ chere na i nwere ike ime ime
♦ achọghị ka oge gị gbanwee
♦ na-eji ọgwụ ndị ọzọ nwere ike imetụta pill
♦ nwere ọbara ọbara na-enweghị atụ n'etiti oge ma ọ bụ mgbe enwere mmekọahụ
♦ amalitela ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa obi ma ọ bụ nwee ọrịa strok
♦ nwere ọrịa imeju
♦ nwere ọrịa kansa ma ọ bụ na ọ nwere ya n'oge gara aga
♦ nwere cirrhosis siri ike ma ọ bụ etuto imeju
♦ Ọ bụrụ na ị nwere ahụike ma ọ nweghị usoro ahụike ọ ga - eme ka ị ghara iburu eriri desogestrel, ị nwere ike iburu ya ruo mgbe ị ga - eme mụọ ma ọ bụ ruo mgbe ị bụ 55.
Ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enye nwa ara. Obere ole na ole nke nwere ike ịbanye n'ime mmiri ara gị, ma nke a anaghị emerụ nwa gị. Ọ dịghị emetụta ụzọ e si emepụta mmiri ara ara gị.
you can use it at any age – even if you smoke and are over 35 some medicines, including some (uncommon) ọgwụ nje, can make it less effective
♦ Find out Ọkụ nke Desogestrel windo XP, na dee ederede gị.
Tags: zụta Desogestrel ntụ ntụ, Desogestrel ntụ ntụ
Nke a bụ ihe niile ị chọrọ ịma banyere Bortezomib Kedu otutu 4-DHEA na-agbanwe na Testosterone?